Unoshuva kutaura newe wega paWhatsApp? Heano maitiro aungaite neaya ma hacks
WhatsApp izita rakakurumbira uye isu hatigone kutaura zvakakwana nezvekuti mameseji app anoshandiswa zvakadii. Iyo Facebook-inopihwa puratifomu haingogadzirire yakanakira yekutaurirana svikiro asi inoita kuti uite zvakanyanya. Iwe unosvika pakutumira mapikicha nemavhidhiyo anonyangarika (izvo WhatsApp inodana Status), inoita kuti ufonere vhidhiyo, kufona kwezwi, uye zvimwe zvakawanda. Apa ndipo patinoedza kufunga zvimwe ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Kuda kutaura newe pachako paWhatsApp? Heano maitiro aungaite neaya ma hacks
WhatsApp inotsanangura zvinoitika kana ukasabvuma mutemo wayo mutsva wepachivande
Mufananidzo naAlex Castro / Iyo Verge WhatsApp yakatsanangura zvichaitika kune vashandisi vasingagamuchire yavo nyowani yekuvanzika mune FAQ pane yayo webhusaiti. Kutanga May 15, mashandiro ayo anozoita mashoma, uye vashandisi havachakwanise kutumira kana kuverenga mameseji kubva kuapp. Vacharamba vachikwanisa kugamuchira mafoni nezaziso, asi izvi zvinongogoneka… [Verenga zvakawanda ...] nezveWhatsApp inotsanangura zvinoitika kana ukasabvuma mutemo wayo mutsva wezvakavanzika
WhatsApp izwi manotsi akanakira kutaurirana nekukurumidza. Pakudzvanya bhatani, unogona kukurumidza kuchinja kubva pakunyora mameseji kuenda pakushandisa izwi rako kutumira mameseji. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uchida kupfuudza poindi nekukurumidza, kana nenzira inoda rumwe ruzivo kana manzwiro ayo mameseji akajeka asingagone kupa. Nekudaro, kuve nemunhu wepedyo newe kutumira ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuteerera kuWhatsApp Izwi manotsi zvakangwara kuburikidza nefoni yefoni